Mayelana NATHI - Xiamen Haida Co., Ltd.
Singabakhiqizi bemikhiqizo yokugeza, isethi yesipho sokugeza, ibhomu lokugeza, insipho yesandla, insipho yesandla esinamagwebu, i-sanitizer yesandla, i-lotion, i-shampoo, i-conditioner, ikhandlela le-soy, insipho, imaski, i-parfum, i-home diffuser, i-eye shadow, i-lip balm, i-lipstick , ukusula okumanzi, izimonyo njalonjalo.
Ifektri yethu yasungulwa ngonyaka we-1994 enesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-25 icebile futhi ihlolwe yi-BSCI, futhi idlula ukuhlolwa kwe-BV, SGS ne-Intertek, futhi sihlangabezana namazinga e-Europe nase-US.
Kuze kube manje, sethembekile ngabathengi abakhulu emhlabeni wonke futhi sidlulisa ukuhlolwa kwabo kwemboni, njengeKmart, Wal-mart, Wastons, Disney, Target, Costco njll nezinsizakalo ze-OEM ne-ODM ezitholakalayo.
Akunandaba ukuthi ungumthengi omncane noma umthengi ngobuningi, uzothola isixazululo esingcono kakhulu sokupakisha kanye nensizakalo enhle kakhulu evela kithi.
Siyakuqinisekisa ngekhono lethu lobuchwepheshe, intengo yokuncintisana nekhwalithi ephezulu.
Yamukela yomibili imiyalo ye-OEM ne-ODM. Ithimba lethu elinolwazi lokuklama lizokunikeza isixazululo sokupakisha esiqeqeshiwe.
Ngaphansi kohlelo lokuphatha lwe-ISO, silawula ikhwalithi ngokuqinile kusuka kokungavuthiwe kuya kumkhiqizo ophelile.
Sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-25 sefektri kulo mkhakha futhi sinabaphathi bethimba lensizakalo neqembu lobuchwepheshe.